Way wanaagsan tahay in la ogaado in waxa jirada kuu keenayaa uu covid-19 yahay iyo inkale, Markaas ayaad sameyn kartaa ka hortaga/taxadirka si aanay dadka kale fayruska kaaga qaadin.
Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa meesha aad joogto khuseeya hesho.
Här kan du läsa texten på svenska
Goorma ayay tahay inaan tijaabo iska qaado?
Waa inaad tijaabo dhiibtaa haddii aad calaamado covid-19 noqon kara leedahay. Waxay taasi khuseysaa xitaa haddii lagu tallaalay:
Waxyaalo dheeraad ah oo cudurka ku saabsan ka akhriso qoraalka Covid-19.
Waxaad sidoo kale inaad tijaabo dhiibto u baahan kartaa haddii uu mid kuwan ka mid ahi kugu haboon yahay.
Waxaad la kulantay qof Covid-19 qaba.
Dhakhtar ama kalkaaliso ayaa kaa dalbadey inaad tijaabo iska qaado.
Qofka uu covid-19 ku dhacay ayaa ka difaaca inuu hadana xanuunsado ka ilaaliya, in muddo ah.
Dadka covid-19 ku dhacay badankooda ayaa ka dib difaac yeesha muddo ugu yaraan lix bilood ah.
Difaaca micnahiisu waxa weeye in difaaca kaa ilaaliya inuu mar kale kugu dhaco oo aad xanuunsato aad leedahay.
Tijaabo iska qaad haddii aad covid-19 qaaday muddo lix bilood ka badan oo aad jirato.
Waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad tijaabo iska qaaddo markaad Iswiidhan u soo safreyso.
Qofka wadan kale tagey ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu tijaabo iska qaado markuu Iswiidhan yimaado.
Ka akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan xeerarka khuseeya markaad Iswiidhan u soo safreyso. Boggu waxa uu ku qoran yahay af Ingiriisi.
Tijaabada caadi ahaan la sameeyo waxa loo yaqaanaa tijaabada PCR-ka. Waxaad dalban kartaa tijaabada PCR-ka.
Baaritaanka-PCR oo bilaash ah baa lagu qaadaa rugta caafimaadka ama baaritaanka guriga lagu qaado
Baaritaanka- PCR ee lagu qaado rugta caafimaadka
Waxaad ballan ka qabsan kartaa rugtii caafimaad ee aad rabtid si lagaga qaado baaritaanka- PCR. Waxaad ballanta ka qabsan kartaa kombuyuutarka ama waad wacaysaa. Shaqaalaha caafimaadka waxay tijaabada kaaga qaadi karaan goobta ama ku siin karaan qalabka tijaabada lagu qaado si aad iskaa iskaga soo qaadid tijaabada.
Warbixin dheeri ah iyo xogaha meelaha laga la xiriiro
Sidan ayaa tijaabada/shaybaanka loo sameeyaa
Waxa tijaabada lagu qaadayaa qori u gaar ah oo sanka ama cunaha la galinaayo, ama sanka iyo cunaha labadaba.
Waxa la dareemaa waxaan caadi aheyn, laakiin kuma xanuujineyso.
Kalkaaliso ayaa tijaabada qaadeysa.
Adiga ayaa tijaabo iska qaadi kara. Markaas ayaad heli doontaa macluumaadka ku saabsan sida aad sameyn doonto.
Guriga joog ilaa iyo inta ay jawaabtu kuu soo baxayso
Waxa muhiim ah inaad guriga joogto ilaa iyo inta ay jawaabtu kuu soo baxayso.
Qofka covid-19 ka qaba
Haddii tijaabadu/shaybaadhku uu muujiyo inaad covid-19 qabtid waa inaad guriga joogto ilaa iyo inta aanad qofna qaadsiineynin. Waxaanad cid qaadsiineynin marka waxyaalahan oo dhan aad leedahay:
Inaad si buuxda uga soo roonaatey.
Waxaad bilaa qandho aheyd ilaa laba maalmood iyo hebeen.
Waxa markaad jiratey ka soo wareegtey ugu yaraan toddobo maalmood.
Inaad tijaabo cusub iska qaado uma baahnid si aad ugu ogaato inaad weli cudurka qabtid.
Dadka aad la degan tahay ayaa sidoo kale u baahan kara inay guriga joogaan haddii aad covid-19 qabtid. Waxaad taas ogaan doontaa markaad jawaabta tijaabada hesho.
Wax dheeraad ah ka akhriso qoraalka Talada la siinaayo qofka covid-19 qaba.
Qofka aan covid-19 qabin
Haddii jibaabtu ay muujiso inaanad covid-19 qabin waa inaad guriga joogto ilaa iyo intaad ka soo roonaaneyso oo aanad ugu yaraan hal maalin qandho laheyn.
Jerker Jonsson, Dhakhtarka, khabiirka cudurada faafa, Folkhälsomyndigheten, Stockholm